पुन दम्पतीको सहयोगले ४ डाक्टर – Health Post Nepal
२०७७ असार २८ गते | Sunday, 12 Jul, 2020
पुन दम्पतीको सहयोगले ४ डाक्टर
२०७६ कार्तिक १७ गते १०:५९
डाक्टरलाई नै कोरोना संक्रमणको आशंका, संत्रासमा दार्जीलिङ
अस्पतालको ड्युटी अवधिमा निजी अभ्यास गर्ने सरकारी डाक्टरलाई कारबाही गर्छु : मन्त्री ढकाल
तीन महिनादेखि अनुपस्थित डाक्टरलाई सात दिनभित्र हाजिर नभए जागिरबाट निकाल्ने चेतावनी
आबुई नि डाक्टर! यिनले त भाइरस ल्याउँछन्…
बुटवलका एक दम्पती अक्षयकोष स्थापना गरी आर्थिक अभावका कारण पढाइबाट टाढिने अवस्थामा पुगेका बालबालिकालाई सहयोग गर्नमा लागेका छन् । उनीहरूले सुरु गरेको शैक्षिक क्षेत्रको सामाजिक कामले सामाजिक काम गर्न मन पनि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सँगसँगै उनीहरूको यो कामले परिवारका लागि मात्र धनसम्पत्ति बटुल्न मरिहत्ते गर्नेहरूका लागि सेवाभावको सन्देश दिएको छ ।
खेमराज पुन र ओमीकला पुन बुटवलको एक औषधि पसलका थोक बिक्रेता हुन् । यी दम्पतीले खेमओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान स्थापना गरी पैसा नभएर पढ्नबाट वञ्चित बालबालिकालाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले अहिले १५ जनाको पठन–पाठनमा सहयोग गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ११ जना छात्र र ४ जना छात्रा छन् । तीमध्ये ४ जनाले एमबिबिएस पूरा गरिसकेका छन् भने २ जना बन्नेक्रममा छन् । डा. नगेन्द्र श्रीश, डा. जमुना श्रेष्ठ, डा. विपिन चौधरी र डा. काशीराम विक प्रतिष्ठानकै सहयोगमा डाक्टर बनेका हुन् । राजकुमार गुप्ता र दिनेश बफाल पुन एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका छन् । अर्का एकजना दीपक जिआर युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा बी फार्मेसी पढिरहेका छन् । अन्य ५ जना डिप्लोमा तहको अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानको सहयोगमा विद्यालय तहमा ४ जना अध्ययन गरिरहेका छन् ।
परोपकारी मन भएका दम्पतीले कमाइको केही रकम छुट्याएर सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता देखाएका हुन् । उनीहरूको सहयोग आर्थिक अभावका कारण पढ्न कठिन भएका बालबालिकाका लागि हो । सुरुवातमा खेमराज पुनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा १७ लाख रुपैयाँ अक्षयकोषमा छुट्याएर बालबालिकालाई पढाउने कामको थालनी गरेका थिए । उनले ०७० सालमा आफ्नो ५१औँ जन्मदिनका अवसरमा यो काम सुरु गरेका हुन् । त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा ०७१ मा खेमओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान दर्ता गरे । संस्थामा सामाजिक काममा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी सामुदायिक संस्थाको रूपमा विकास गरे । हाल सो अक्षयकोषको परिचालनमार्फत बालबालिकाले अध्ययनमा सहयोग पाउँदै आएका छन् ।
पुनले बर्सेनि अक्षयकोषमा रकम थप्दै आएका छन् । उनले ०७१ को जन्मदिनमा ८ लाख, ०७२ मा ८ लाख, ०७३ मा ८ लाख रकम अक्षयकोषमा थप गरे । त्यसैगरी, ०७४ सालको जन्मदिनमा ९ लाख, ०७५ सालमा १२ लाख र ०७६ सालमा १३ लाख रकम अक्षयकोषमा थप गरेका छन् । १७ लाखबाट सुरु भएको अक्षयकोषमा अहिले ७५ लाख पुगेको छ । पुन दम्पतीको अक्षयकोषमार्फत पठन–पाठनमा सहयोगको काम अहिले छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको सहयोगमा एमबिबिएस पढ्नेहरू के भन्छन् ?
डा. काशीराम विक
मैले अरूको सहयोगमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेँ । त्यसपछि एक वर्षसम्म निजी स्कुलमा पढाएर पैसा जम्मा गरेँ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको एमबिबिएस छात्रवृत्तिको परीक्षामा नाम निस्किएपछि गाउँमा ऋण खोजेर पढ्ने निधो गरेँ । छात्रवृत्तिबाट ३० लाख शुल्क मिनाहा भए पनि बस्न, खान, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, प्रयोगात्मक सरसामानलगायतलाई लाग्ने पैसा मसँग थिएन । महिना बित्दै गर्दा खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । त्यही चिन्ताका बीच खेम अंकल मेरो दुःखको अभिभावक बनिदिनुभयो । उहाँको सहयोगमा एमबिबिएस पढाइ पूरा गरेर हाल जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा कार्यरत छु । उहाँले गरेको सहयोग र गुन म शब्दले वर्णन गर्न सक्दिनँ । त्यो सहयोगको ऋण म कसरी तिर्न सकूँला र !
जिल्ला अस्पताल, गुल्मी
मेरो परिवारमा म, दिदी र भाइ छौँ । हाम्रो परिवार निम्न वर्गीय परिवार हो । म सानै छँदा बुबाको देहान्तपछि घरमा आर्थिक अभाव भएको थियो । घरको सबै दायित्व आमामाथि आइपर्यो । कक्षा १२ पछि शिक्षा मन्त्रालयले लिएको परीक्षामा एमबिबिएस पढ्नका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेँ । तर, पढ्नका लागि खाने, बस्ने र शैक्षिक सामग्रीका लागि आर्थिक स्रोत थिएन । यस अवस्थामा खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान मेरा लागि सञ्जीवनी बुटी बनिदियो । मेरा लागि उहाँहरू जीवनकालभरका लागि सहयोगी र प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ । उहाँको प्रेरणाको गुन तिर्न म प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेर सामाजिक काममा अघि बढ्नेछु ।
डा. जमुना श्रेष्ठ
म गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेकी छु । मेरो घर सुर्खेत रजेना हो । यो संसारमा अरूका लागि सोच्ने मान्छे पनि हुँदा रहेछन् । त्यही सोचका व्यक्ति खेम अंकलको सहयोगबाट म डाक्टर पढ्ने सपना पूरा गर्दै छु । माओवादीमा लागेको अवस्थामा बुबाको मृत्यु, घरमा आम्दानीको बाटो नभएकी मजस्तालाई माथिल्लो कक्षाको पढाइ सपनाजस्तो हुँदो रहेछ । उहाँको सहायोगविना मेरो डाक्टर बन्ने सपना कसरी पूरा हुन्थ्यो र ?
दिनेश बफाल पुन मगर
वीरगन्जमा होम ट्युसनको फिस निकै कम थियो । ५ सयदेखि एक हजार मात्र एउटा ट्युसनबाट आउँथ्यो । म दिनमा ६ वटा ट्युसनसम्म पढाउँथेँ । ट्युसनबाट महिनाको ७ हजारजति आउँथ्यो । तर, मैले कलेजमा १७ हजार बुझाउनुपर्थ्यो ।
बिहान र साँझ ट्युसन पढाउँदैमा म थाक्थेँ । ट्युसन पढाउँदा मलाई पढ्न गाह्रो भइरहेको थियो । प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा म फेलसमेत भएँ । पढाइभन्दा पनि पैसा कसरी जुटाउनेतिर मेरो ध्यान गएको थियो । खेमओमी पुन कल्याणकारीले सहयोग सुरु गरेपछि मैले ट्युसन घटाएर तीनवटामा झारेको छु । अहिले उहाँको सहयोगबाट मलाई राहत मिलेको छ ।
नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज
के भन्छन् अभिभावक ?
मेरो छोराले पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरबाट फुल स्कलरसिपमा डाक्टरको पढाइ पूरा गरेको छ । उसले ०७५ मा पढाइ पूरा गरेको हो । अहिले पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा जागिर सुरु गरेको छ । डाक्टर पढ्न भर्ना गरेको छोरालाई बस्ने, खाने, शैक्षिक सामग्रीलगायत खर्च धान्न नसकेका कारण पढ्न सक्ने अवस्था भएन । बीचमै कक्षा छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । म मजदुर हुँ, गाह्रो लगाउने काम गर्छु । धेरै ठाउँमा हारगुहार गरेँ, तर केही उपलब्धि भएन । म प्रतिष्ठानमा आएँ । छोराको तेस्रो वर्ष चल्दै थियो । ढुंगा खोज्दा देउता भेटिन्छ भनेझैँ भयो मलाई । छोरालाई कुरा सुनाएँ । छोराले साथी सुतेपछि ल्यापटप प्रयोग गर्थ्यो । त्यतिखेर ल्यापटप नै किनिदिनुभयो ।
प्रतिष्ठानले सहयोग नगरेको भए मैले छोराको पढाइ छोडाएर घर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । छोरो डाक्टर भएपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । मैले कक्षा ९ सम्म पढेर छाडेको हुँ । गरिबको डाक्टर पढाइमा पहुँच छैन, तर प्रतिष्ठानको सहयोगले मेरो सपना साकार भएको छ ।
अभिभावक (डा. विपिन चौधरीका बुबा)
मेरा दुई छोरी र एक छोरा छन् । पढाइमा तीन छोराछोरी नै राम्रा निस्किए, तर पढाउन पैसा पुगेन । छोरीहरू जमुना श्रेष्ठले मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरामा एमबिबिएसमा र गंगाले नेपाल मेडिकल कलेजमा बिडिएसमा फुल स्कलरसिपमा नाम निकालेपछि एकातिर खुसीको सीमा रहेन भने अर्कोतर्फ कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता थपियो । मेरो सानो चियापसल थियो । शुल्क तिर्न नपरे पनि खान, बस्न र शैक्षिक सामग्रीका लागि सहयोग चाहिने भयो । गोरखा स्थायी घर भए पनि बुटवलमा डेरामा बस्दै आएको हाम्रो परिवारमा छोरीलाई डाक्टर पढ्नका लागि समस्या भयो । छोरी पढाउन पठाउने कि नपठाउने भन्ने दोधारमा परेका हामीलाई खेम ओमी पुनको सहयोगले आँट आयो र मैले छोरीलाई पढ्न पठाएँ ।
अभिभावक (डा. जमुना श्रेष्ठ)
नानी ४ वर्ष र बाबु ९ वर्षको हुँदा श्रीमान् बित्नुभयो । मैले पाल्पामा ढाका बुनेर बच्चा हुर्काएँ, पढाएँ । एसएलसी दिएपछि छोरा टेक्निकल लाइन पढ्छु भनेर र बुटवल झर्यो । स्कलरसिपमा नाम निकाल्न मिहिनेत गरेर पढ्यो । इन्ट्रान्स दियो, २ नम्बरमा नाम निकाल्यो । मायादेवी टेक्निकल कलेज बुटवलमा ३ वर्ष फार्मेसी पढ्यो । काठमाडौंको संस्थाले गाडीभाडा मात्र सहयोग गर्यो । छोराले करिब दुई वर्ष पढाइ छाडेर काम गर्यो ।
पछि फेरि माथिल्लो कक्षा पढ्न कस्सियो । माथिल्लो अध्ययनका लागि पनि फुल स्कलरसिप पाएपछि फेरि खर्च चाहियो । मेरो मासिक पाँच हजारको जागिरले के पुग्थ्यो र ? खेमओमी संस्थासँग सम्पर्क भयो । उहाँहरूले सहयोगको हात बढाउनुभयो । अहिले छोरा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा बी फार्मेसी पढिरहेको छ । बुटवल बसेर पढ्छ । संस्थाबाट छोराको गाडीभाडा र खाजाखर्च गरी मासिक ६ हजार सहयोग पाएका छौँ ।
अभिभावक (दीपक जिआरकी आमा)
को हुन् पुन दम्पती ?
खेमराज पुनको जन्म लाहुरेको गाउँले चिनिने गुल्मी भार्सेमा ०१९ मा भएको हो । उनले सानै छँदा भारतीय सेनामा रहेका बुबा गुमाउन पुगे । बुबाको निधनपछि खेमसहित तीन भाइलाई आमाले हुर्काउने, पढाउने गरेकी हुन् । खेमले आइएस्सीसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
खेमको विवाह बुटवलकै ओमीकला गाहासँग ०४४ मा भएको थियो । ओमी सामाजिक क्षेत्रमा लागेकी महिला हुन् । उनले महिला जेसिज, इनरह्विल क्लब, मगर महिला संघलगायत दर्जनजति सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकी छिन् । ओमीले आइएसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् । पुन र गाहा दुवै लाहुरे परिवारका सन्तति हुन् ।
सक्नेले नसक्नेलाई सहयोगको प्रयास गरौँ भन्ने लागेर नै अक्षयकोषमार्फत बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गरेको पुनको भनाइ छ । अक्षयकोषको रकम वृद्धि गर्दै लैजाने र त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने उनी बताउँछन् । उनले आफ्नो गाउँको स्कुल जनसेवा माविमा ७ लाखको मनगौरी पुन शैक्षिक अक्षयकोषको स्थापना गरिदिएका छन् ।
Tags: खेमराज पुन र ओमीकला पुन, डाक्टर
One thought on “पुन दम्पतीको सहयोगले ४ डाक्टर”
बोम बहादुर श्रीस says:
हाम्रो समाजमा दानवीरहरुको खडेरी परिरहेको बेला यस्ता पनि महानुभावहरु छन् जो निश्वार्थ केही गरौं भन्ने भावना मात्र होइन कार्य रुपमै उत्रिन्छन् । सिद्धान्त कम, व्यहार बढी देखाउँछन् । भरिएको लोंचे जति अरुलाई पस्कियो उति भरिन्छ भन्छन् । देउता बाजैले यीनि दुइलाई सदासर्वदा खुशि राखुन् । लामो आयु देउ भग्मान् ।
LeaveaReply to बोम बहादुर श्रीस Cancel reply
झापामा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
ऐश्वर्याकी आमा छोरीमा पनि कोरोना पुष्टि
तीन चिकित्सकसँगै पक्राउ पर्नेमा वडा अध्यक्षसहित १२ जना, म्याद थपका लागि बहस जारी
५१ प्रतिशतले जिते कोरोना
थप ८२ जनामा कोरोना, संक्रमित संख्या १६ हजार ८०१ पुग्यो
अस्पतालबाट अमिताभले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी भगवानका प्रतिमूर्ति हुन्’
खाली हुँदैछन् देशभरका क्वारेन्टाइन
गण्डकीमा थप १५ जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ११ सय ९२ पुग्याे
चितवनमा पक्राउ तीन चिकित्सकसहित ९ जनालाई काठमाडौं ल्याइयो, मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युराेकाे हिरासतमा
समान तहमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद, सहसचिवमै २७७२ कम तलब!
संक्रमित अब घरमै, निगरानीका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन